noproxy နဲ့ firefox မှာ error တက်နေလို့ . . . — MYSTERY ZILLION
noproxy နဲ့ firefox မှာ error တက်နေလို့ . . .
သြဂုတ်လ 28 ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီး Mpt လိုင်းတွေ 203.81.72.200 အစား . .NoProxy ဖြင့်ပြောင်းလဲ့အသုံးပြုနေရပါပီ . . .
အခုကျွန်တော့ဆီမှာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတာကတော့ . .firefox မှာ noproxy နဲ့သုံးတာ server not found ဖြစ်နေတာပါ . . ဆိုင်မှာရှိတဲ့ စက်အကုန်လုံးမှာ အဆင်ပြေပြီး ဆာဗာအနေနဲ့သုံးထားတဲ့ စက်တစ်လုံးထဲမှာ အဆင်မပြေတာပါ . .ဆာဗာဆိုပေမယ် . . ကျန်တဲ့စက်တွေနဲ့ အတူတူ window xp sp2 ကိုအသုံးပြုထားတာပါ . .အရင် proxy ထည့်ပီးသုံးနေတာအဆင်ပြေပါတယ်. .noproxy လုပ်လိုက်မှ မရတာပါ . . . freedom ဖွင့်ပီးတော့ proxy နေရာမှာ freedom proxy ထည့်သုံးကြည့်တော့ ရပါတယ်. . .noproxy နဲ့လုံး၀မရတာပါ . . . . .
တခြား IE တွေလည်း အဆင်ပြေပါတယ်. . . .
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ ၀ိုင်း၀န်းဆွေးနွေးပေးကြပါအုန်းခင်ဗျာ . ..
အောက်ပါလင့်တွင် ဆွေးနွေးထားတာလေးတွေ ရှိပါတယ် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး
အခုကျွန်တော်ဆီမှာ no proxy နဲmozilla firefox ကို၀င်လိုကိုမ၇ဘူဗျာ
):)):))203.81.72.200 port 80
ကျွန်တော်က bagan ADSL ပါ။:39:
အခုကျွန်တော့ဆီမှာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတာကတော့ . .firefox မှာ noproxy နဲ့သုံးတာ server not found ဖြစ်နေတာပါ . .အရင် proxy ထည့်ပီးသုံးနေတာအဆင်ပြေပါတယ်. .noproxy လုပ်လိုက်မှ မရတာပါ . . . freedom ဖွင့်ပီးတော့ proxy နေရာမှာ freedom proxy ထည့်သုံးကြည့်တော့ ရပါတယ်. . .noproxy နဲ့လုံး၀မရတာပါ . ..
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို.ဆိုင်မှာလည်း ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်။စက် 12လုံးက No proxy နဲ. သုံးလို. အဆင်ပြေနေပြီး တစ်လုံးတည်း အဲလိုဖြစ်နေတယ်။အကို ရေးသွားသလို ချွတ်စွတ်ဖြစ်နေတယ်.no proxy မရတဲ. စက်က ကျွန်တော်ဆီမှာ ဆာဗာစက် တော. မဟုတ်ပါဘူး။castomer သုံးမယ်.စက်ပါဗျာ။ ဖရီးဒမး်နဲ. ဖွင်.ပြီး ဖရီးဒမ်း ပရော်ဇီ နဲ. ပွင်.တယ်။ဆော်ဒီပရော်ဇီ နဲ. လည်း ဖွင်.လို.ရတယ်။နိုးပရော်ဇီကို သာမရတာပါ။နည်းလမ်းသိရင််ညွန်ကြပါဦး ပါဦး